Teessoo jechoota sadiin qofa tajaajila manaan gahuu - BBC News Afaan Oromoo
Teessoo jechoota sadiin qofa tajaajila manaan gahuu
Image copyright WHAT3WORDS
Goodayyaa suuraa Teessoo manneen Mongoliyaatti argamu
Nyaataafi dhugaatii, poostaafi piizaan erguudhaaf duraan teessoon waan dhibeef rakkisaa ture har'a garuu hanga baadiyyaattii ergamaa jiru.
Biyya Moongoliyaatti namoonni jechoota sadi qofatti fayyadamuun bakka jireenyaasaanii adda baasuun akaawuntii baankiitiif kan iyyata yoo ta'u, Finfinneettis jiraattoonni nyaata ajajanii mana isaatti argachaa jiru.
Sirni kunis iskuwer meetirii sadiin (9.8 sq); tokkoon tokkoo teessoo jecha-addaa sadiin adda baasuun, addunyaa bakka tiriliyoona 57'tti qooda.
Sirni Waatsriiwords (what3words) kunisTaanzaaniyaa Aruushaatti Konfaransii TEDGlobal jedhamurratti nama hundaaf teessoo kennuuf hojjetaa ture.
''Teessoo malees bahuu iyyu hin dandeessu,'' jedha kalaqan UK keessaa tokko kan ta'e Kris Shedlik.
''Tajaajilli heddunu teessoo barbaadu. Namoota muraasaaf kana argachuun hin danda'amu yookiin argachuun baayyee cimaa itti ta'a.''
Goodayyaa suuraa Kris Shedlik yeroo muziqeessaa ture babbaduun waan isa rakkiseef What3words kalaqe
Dhaabbanni gargaarsaa Darbaan Afrikaa Kibbaatti argamu tokkoos dubartoota ulfa 11, 000 ta'anif tajaajila teessoo jechoota sadii kennuuf sirnichatti fayyadamaa jira.
''Duraan ambulaansii waammatanii argachuuf sa'aatoota isaan gaafata ture. Amma garuu bilbilanii jechoota teessoo sadii kennuu qofaadha,'' Sheldriik..
Itoophiyaattis sirni Delivar Addis jedhamu nyaataafi dhugaatii manneen nyaataa 25 irraa maamiltoota magaallattii bakka isaan jiranitti biraan gaha.
Goodayyaa suuraa Delivar Addis Watsriwords ta'uun konkolaachisftoonni bakka lakkoofsi teessoo hin jirretti teessoo namoota nyaata ajajan baruuf fayyadamaa jiru
Akkasumas Waatsriwords jalqaba ji'a kanaa irratti sirna poostaa Naayijeeriyaa waliin walii galtee mallatteessee jira.
Naayijeriyaan biyyoota africaa dinagdee cimaa fi ummata miiliyoona 180 olii qabduudha. Garuu, ummata ishee keessaa eergaa mana isaanitti kan argatan %20 qofaadha. Tajaajilli Poostaa fi Telekomunicashiin biyyattis, haala kana waggooa dhufan lama keessatti gara %70tti ol guddisuuf karoorfataniiru.
Sirni kunis biyyoota akka Mongooliyaa, Ivorii Koost, Tongaafi odoolawwan Salamoonitti hojirra oolaa jira.
Kris Sheldrik bara 2013'tti hojii kana eegaluun dura waggoota 10'f oggeessa muziiqaa ture.
''Yeroo hundaa bakka haaraa yoo deeman namoonni hin badu. Miseensonni baandii kiyyaa Jipi'eessii (GPS)tti akka fayyadaman gaafadheen ture. Garuu hin feene yookiin akka waan sirrii hin taaneetti fudhatan. ''
''Ergasiin boodas nama ogeessa heerreegaa ani beeku waliin furmaata itti barbaadu eegalle.''
Boodarra formulaa heerreegaa jechoota 40, 000 tarreessan. Jalqabarratti afaan Ingiliziin ta'uus, yeroo ammaa kanatti sirni kun afaan 14'tti hiikameera.
Haa ta'u malees, sirnichi akkaataa daataa fayyadamurratti qeeqameera. Dhuguma, kubbaaniyaan tajaajila isaa oomisha gara biraa wajjiin walitti makuun fayyadamuuf ni kanfalchiisa.
Taanzaaniyaatti ogeessi teknooloojii olaanaa Baankii addunyaa Edwaard Andarsan sirna kanaan fayyadamuun haala salphaan kitaabota manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa biraan gahuufi ujummoon bishaanii cabe adda baasuuf akka danda'amu olchuuf yaalaa jira.
OMN sagantaa raadiyoo Afaan Oromoon eegaluufi